RN44 : Basy mahery vaika miisa 08 tra-tehaka -
AccueilRaharaham-pirenenaRN44 : Basy mahery vaika miisa 08 tra-tehaka
17/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Noho ny ezaka nataon’ny zandary sy ny polisy any amin’iny faritr’Ambatondrazaka iny, tao aorian’ny fanafihana teny amin’ny lalampirenena faha- 44 farany teo, dia basy mahery vaika miisa valo no saron’izy ireo. Nahitàna basy Mac 36, “revolver” ary basy vita gasy raitra dia raitra . Ankoatra izay, dia olona folo no voasambotra tamin ‘ny fitondrana sy fampiasana izany.
Tao aorian’ilay asa fanakanan-dalana niseho tany amin’iny lalam-pirenena faha-44 iny, andro vitsivitsy lasa, izay nahitàna lehilahy miisa roa manao fanamiana zandary, dia nitrangana fanafihana mitam-piadiana indray tany an-toerana, tamin’ny alahady hariva lasa teo. Ankoatra ny fanafihana taksiborosy dia tokantrano efatra no niharan’ny fanafihana ihany koa. Tao amin ‘ny kaominina iray, telo kilometatra miala ny tanan-dehibe any Ambatondrazaka no nisehoan’izany. Araka ny fanomezam-baovao avy any an-toerana, dia nasesisesin’ireo jiolahy mitam-piadiana ireo, ireto tokantrano ireto. Nanapoaka basy ireo olon-dratsy rehefa tafiditra ny tanàna sy tao an- trano. Vokany vehivavy iray no naratra. Nasain’ireo mpanafika navoaka ny vola rehetra tao an-trano ka voaroba nandritran’ny fanafihana ny vola mitentina 2.000.000 Ariary. Nampandre ny mpitandro ny filaminana ireo voatafika ary nidina teny an-toerana avy hatrany.
Teo noho eo ihany dia raikitra ny fifanenjehana sy ny fifandonana teo amin’ireo zandary sy ireo olon-dratsy ireo. Nisy tamin ‘izy ireo no voasambotra ary tao ihany koa ireo tafaporitsaka. Nitohy ny fisamborana sy ny fitadiavana ireo jiolahy ireo tanyan-tranony, ka tafiakatra folo ny isan’ireo olona voasambotra tamin ‘ny alalan’ny tondro molotra nataon’ireo namany tra-tehaka. Mbola misy olona hafa mpiray tsikombakomba amin’izy ireo ihany koa mbola karohana amin ‘izao fotoana izao. Ny fantatra ihany koa dia misy ifandraisany tamin’ilay resaka fitorahana sy fitifirana ireo fiara taksiborosy mandalo any amin’iny lalam-pirenena faha-44 iny ireto olon-dratsy mitam-basy tratra ireto. Tambazotra efa tena ikoizana ary efa gaigilahy amin ‘ny fanafihana mitam-piadiana ireto andian-dehilahy ireto, ary efa ela no nikarohan’ireo polisy sy zandary any an-toerana azy ireo. Voaporofo amin ‘ny alalan’ireo basy izay nampiasain ‘ ireo olon-dratsy ireo izany. Raha ny nambaran’ny mpitandro ny filaminana any an-toerana mantsy, dia tsy misy olona hafa tokony hanana fahazoan-dalana hitazona ireo fitaovam-piadiana mahery vaika tratra tany amin ‘izy folo lahy ireo afa-tsy ny manampahefana ihany. Efa voasokajy ho isan’ireo basy avo lenta sy lafo vidy mantsy izany. Miroso amin ‘ny fanadihadiana lalina ireo mpitandro ny filaminana, ary mitohy ihany koa ny fikarohana ny olona mpamatsy fitaovam-piadiana mahery vaika toy izao.